Manchester United oo u aqoonsatay Andre Silva bartilmaameedka suuqa kala iibsiga Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Manchester United oo u aqoonsatay Andre Silva bartilmaameedka suuqa kala iibsiga
Manchester United oo u aqoonsatay Andre Silva bartilmaameedka suuqa kala iibsiga
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseynayso saxiixa Xidiga Kooxda Eintracht Frankfurt ee Andre Silva .
25 jirkaan ayaa heshiis joogto ah ugu soo biiray Frankfurt xagaagii hore, waxaana uu qaab ciyaareed fiican soo bandhigay xilli ciyaareedkii 2020-21, isagoo dhaliyay 19 gool 22 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Xiddiga reer Portugal ayay ku adkaatay in uu si fiican uga dhex muuqdo AC Milan intii u dhexaysay 2017 iyo 2020 laakiin waxa uu haatan dhaliyay 35 gool 59 kulan oo uu u ciyaaray kooxdiisa haatan, oo ay ku jiraan amaah uu ku soo qaatay xilli ciyaareedkii 2019-20.
United ayaa la rumeysan yahay inay dooneyso inay la soo wareegto weeraryahan cusub oo kooxda ah, iyadoo Borussia Dortmund ay doorbideyso Erling Braut Haaland sii joogitaankiisa laakiin kooxaha sida Real Madrid iyo Barcelona ayaa sidoo kale la sheegayaa inay ku jiraan adeegiisa
Sida laga soo xigtay Sky Deutschland , kooxda Macalin Ole Gunnar Solskjaer ayaa u aqoonsatay Silva inuu yahay iibsi macquul ah, iyadoo ciyaaryahanka labaad ee ugu goolasha badan xilli ciyaareedkan Bundesliga lagu heli karo qiimo macquul ah.
Weeraryahankan ayaa sidoo kale rikoor fiican ku leh heer caalami – halkaasoo uu ka garab ciyaaro weeraryahanka United Bruno Fernandes – isagoo shabaqa soo taabtay 16 jeer 37 kulan oo uu saftay.
Heshiiska Silva uu haatan kula joogo Die Adler ayaa dhacaya ilaa xagaaga 2023.
Previous articleReal Madrid oo kula tartameysa Liverpool, iyo Manchester United saxiixa David Carmo
Next articleMudada uu Paul Pogba garoomada ka maqnaanayo oo la shaaciyay